Manoro Hevitra Ny Hetsik’ireo LGBT ny Mpanaramaso Ny Dokambarotra Any Singapaoro Mba Hanala Ilay Teny Filamatra “Fanohanana ny Fahalalahana Mitia” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 5:10 GMT
Ny lohahevitry ny fankalazana ny Pink Dot (Teboka Mavokely) amin'ity taona ity dia “Fanohanana ny fahalalahana mitia”. Loharano: Facebook.
Hatao ny 1 Jolay ny hetsika fanao isan-taona ao Singapore LGBT fantatra amin'ny hoe “Pink Dot”, miaraka amin'ny foto-kevitra “Fanohanana ny fahalalahana Mitia.”
Maherin'ny 100 ireo mpanohana no efa nampanantena ny fanohanany ho an'ilay hetsika, izay antenaina hahavory mpandray anjara an'arivony ao amin'ny Kianja Hong Lim, ilay toerana iray hany ahafahan'ny olom-pirenena manao hetsi-panoherana sy mivory miaraka amin'ny fanarahamaso faran'izay kely ataon'ny polisy.
Araka ny efa nampoizina, vondrona isan-karazany mpandala ny nentindrazana no nanohitra am-pahibemaso ny Pink Dot tamin'ny filazana fa mampirisika ny ratsitoavina izay tsy iraisan'ny rehetra ao Singapaoro izany. Nisy nitaraina momba ny fisian'ireo takelaka fametrahana dokambarotra an'ny Pink Dot eny amin'ny toeram-pivarotana goavana, trano fijerena sarimihetsika, ary toerana hafa izay tsidihin'ny ankizy.
Raha ny marina, angamba nisy fitarainana mazava nipetraka natao mahakasika ny takelaka fanaovana dokambarotry ny Pink Dot napetraka any anatin'ny trano iray fijerena sarimihetsika an'ny orinasa Cathay, izay nanaitra ny Manampahefana momba ny Fenitry Ny Dokambarotra ao Singapaoro (ASAS) mba hiverina hijery ilay dokambarotra. Cathay no mpanohana teo aloha ny Pink Dot.
Taorian'izay nangataka tamin'ny orinasa Cathay ny ASAS mba hanala ny teny filamatry ny Pink Dot any anatin'ny iray amin'ireo trano fijerena sarimihetsik'izy ireo.
Ny Filankevitry ASAS dia miombona hevitra amin'ny fomba fijery hoe ny dokambarotra eny imasom-bahoaka dia tokony ho vonona amin'ny fahatsapana ny fihetsehampon'ny vahoaka. Araka izany, tokony hisoroka ireo fanambarana any anaty dokam-barotra izay mety hanohina ny fihetsempon'ny vahoaka ireo mpanao dokambarotra. Izany no antony fototra nangatahan'ny ASAS tamin'ny Cathay sy ny Pink dot mba handinika ny fanalàna ny teny filamatra “Fanohanana ny fahafahana mitia”.
Ity ambany ity misy sarin'ny takelaka fametrahana dokambarotra izay nasongadina tao amin'ny pejy Facebook manohitra ny Pink Dot. Narovan'i Cathay ny fametrahana ilay dokambarotra talohan'ny nanaovan'ny ASAS ny fangatahana hanala ilay teny filamatra.
Dokam-barotra Pink Dot: milaza ny Cathay fa mino ny fisian'ny fiarahamonina iarahan'ny rehetra izy https://t.co/8yARXMJ3eW tao amin'ny @ChannelNewsAsia
Birao mpanolotsaina ankatoavin’ny governemanta ny ASAS. Nanazava izy fa na tsy manitsakitsaka ny fenitry ny fanaovana dokambarotry ny firenena momba ny fikojana ny soatoavin'ny fianakaiana aza ilay takelaka fametrahana dokambarotra, ilay teny filamatra dia mety handrehitra ny “fahamora tohin'ny vahoaka”. Afaka mijanona ilay takelaka fametrahana dokambarotra milaza ny fisian'ilay hetsika, fa nanambara ny ASAS fa tokony hiverina hijery ny fampiasana ilay teny filamatra ny Cathay.
Nanaiky ny torohevitr’I ASAS ny Cathay fa namerina kosa izy fa tsy afaka ny hamafa fotsiny amin’izao ilay teny filamatry ny doka satria an’ny Pink Dot io. Nanampy ny mpitondra tenin’I Cathay fa maneho ny asan'ny orinasa io teny filamatry ny Pink Dot io:
Mifanaraka amin’ny anton’asanay hatramin’izay ka hatramin’izao ny mamory ny mampitambatra ny olona. Manantena ny hanentana ny olona izahay mba hanaiky ny soatoavin’ny miralenta izay ahafahan'ny tsirairay miaina sy mitia ankahalalahana.
Ho azy ireo, tena very hevitra noho ny fomba fihevitry ny ASA ireo mpikarakara ny Pink Dot.
Tsy hitanay ny fomba iantsoana ny teny filamatra ho amin'ny fampitambarana sy ny fitiavana ho afaka heverina fa manozongozona ny fotokevitra momba ny fianakaviana na tsy manaja ny tsirairay.
Dia tsy afaka ny tsy hanontany tena izahay raha toa ka avy amin'ny fitarainan'ny vondron'olom-bitsy manohitra ny Pink dot izay manohana ny fanavakavahana ny vondrom-piarahamonina LGBT ao Singapaoro ilay fangatahan'ny Filankevitra. Matoky izahay fa hanavaka ny hafatry ny fampiraisana, fahasamihafana ary ny fitiavana amin'ilay iray mikatrana ny hampisaraka antsika noho ny fahasamihafana ireo olona eto Singapaoro.
Nanoro hevitra ny ASAS ilay manampahaizana momba ny haino aman-jery, Cherian George, mba hifantoka amin’ny olana hafa maika kokoa toy ny fiakaran’ny herisetra any amin’ireny fandaharana amin’ny fahitalavitra ireny:
Raha afaka mandray fitarainana tsy manan-danja toy izao ny fahefana miandraikitra ny fenitry ny dokambarotra, azo antoka fa ho afaka hanenjika amin-kery ny resaka ara-moralin’ny dokambarotra izay manery kokoa manoloana ny zon’ny mpanjifa.
Satria ny taona maro nanaovana fikarohana milaza amintsika ny fiantraikany eo amin'ny tanora ny fanehoana ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny herisetra, tena mino marina ve ianao fa nanao zava-dehibe ny ASAS mba handamina ny fanomezana voninahitra ny herisetra noforonin'ny eritreritra eny amin'ireo toerana nataontsika ho an'ny daholobe?
Tsy ny asan'ny ASAS ihany no fanoherana natrehin'ny Pink Dot tamin'ity taona ity. Tamin'ny volana lasa, nampahatsiahivin’ireo mpikarakara ny fanitsiana vao haingana ny lalàna mandrara ny fandraisana anjaran'ny vahiny amin'ny hetsika ara-politika toy ny Pink Dot. Ankoatra izay, nanizingizina ny polisy fa ilaina ny fefy manodidina ny zaridaina mba hiantohana ny fiarovana ireo mpandray anjara. Voarara tsy hahazo mpanohana avy any amin'ny firehena hafa ihany koa ny Pink Dot.
Na mitombo aza ny herin'ny vondrom-piarahamonina LGBT, mbola manameloka ny firaisana ara-nofo eo amin'ny lahy samy lahy ny ao Singapaoro.
Ilay hetsika amin'ny 1 Jolay no ho fankalazana faha-9 ataon'ny Pink Dot ao Singapore. Tamin'ny 2015, nahavory mpandray anjara maherin'ny 28.000 ilay hetsika.
7 ora izayHong Kong (Shina)